November 2017 - iftineducation.com
Rag badan waxay u haystaan jecaylka marka la shukaansanayo gabadha in lagu soo xiragaliyo waxaad arkaysaa marka ay shukaansanayaa hadalo waxay daldalaan abaayo macaan waan ku jeclahay abaayo naftayda ayaad la mid tahay, laakin marka la isguursado xaaska waa lagala xishoonayaa hadalka noocaas ah. Waxaa laga yaabaa ninka marka uu naagta guursado oo guurka ka soo wareegato bil iwm,…
Gabdhaha qaar ma jecla wiilasha wanaagsan … waxay jecelyihiin wiilasha xun xun ee sida xun ula dhaqma.. ma jecla wiilasha marwalba garabkooda jooga ee caawinaya ee sida xad dhaafka ah u jecel. Waxay jecelyihiin kuwo macangag ah ee qalbiga adag ee marwalba kadeeda. Kuwa adag oo iyaga silciya ~~ kuwaas oo xitaa iyaga naqaska ku dhajiya ~~~ kuwaas oo balan…
Bollywood Town labadii sano ee ugu dambeesay noloshooda ma fadhinin waayo jilaayaal caan ah ayaa noloshooda bur burtay qalad ay ayaga galeen awgeed. Hadaba waxaan sanadkii hore idinla wadaagnay in fanaanka, muusigistaha iyo jilaaga caanka ah Himesh Reshammiya ay xaaskiisii Komal isku dhaceen sidoo kalena isla nooleyn una socdo hanaan ay ku kala tagayaan. Hadaba xog aan wax badan la…
Dumarka bushimaha waaweyn Oo La Ogaaday Inuu Xubin kooguna faruuryo weyn yahay kana raaxo macaan yihiin qayrkood: Daraasad Cusub oo dhawaan ay sameeysay Machadka cilmi baadhista ee fadhigiisu yahay dal india Ee woman’s RSCH Ayaa dhawaan shaaca ka qaaday arrinkani oo in mudio ah baadhitaankiisa lagu guda jiray ayaa hadda daaha laga qaaday waxana cilbaadhista lagu sameeyay dumar tiradoodu kor…
LAYAAB:Nin Muslim ah oo Xabsi u galay in uu Guursaday Xaas Labaad iyo Sababta Ka dambeysa !!
Warhaanhinta Caalamka qaarkood ayaa si weyn u hadal haya dhacdo dadka qaarkood ka yaabisay, kadib markii Nin Muslim ah xabsi ku muteestay xaas labaad uu guursaday. Maxkamad ku taal magaalada Lahore ee dalka Pakistan ayaa xabsi lix bilood ah ku riday in lagu eedeeyay in uu guursaday Xaas labaad isaga oon ogolansho ka heysan xaaskiisi hore. Ninkan ayaan maxkamada ka…